Muchikamu chino SEO, pane zvidzidzo zvinokosha izvo zvishandiso izvi zvekushandiswa kwemasayiti yebindu rekushandisa zvinoshanda. Iwe unogona kukwanisa kudzidza nzira iyo spider inotora nzira yekucheka kuchengetedza dhidhiyo ye data nenzira yakarongeka yewebsite yekuunganidza data - casette di legno per bambini da interno. Tichakurukura BrickSet webhusaiti yekubvisa zvombo. Iyi domain ndiyo inzvimbo-based webhusaiti ine zvinyorwa zvakawanda pamusoro peETGO. Iwe unogona kukwanisa kuita shanduro yePython yokugadzirisa iyo inokwanisa kuenda kunewebsite yeBrickSet uye kuchengetedza ruzivo sezvo deta inosara pahwindo rako. Iyi web scraper inowedzera uye inogona kushandura kushanduka kwemazuva anotevera pakushanda kwayo.